नेपालका कोरोना सं’क्र’मितमा किन लक्षण देखिएन ? यस्ताे छ कारण । – Jagaran Nepal
नेपालका कोरोना सं’क्र’मितमा किन लक्षण देखिएन ? यस्ताे छ कारण ।
Jagaran Nepal शुक्रबार, जेठ ०२, २०७७
काठमाडौं । नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको ‘स्ट्रक्चर’ अध्ययन हुँदै छ। नेपाल प्रवेश गर्दा कोरोना भाइरसले स्वरूप परिवर्तन गरेको अनुमानसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयले अध्ययन–अनुसन्धान गर्न नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई जिम्मा दिएको छ। अनुसन्धानमा कोरोना भाइरसको प्रकार, बनावट र संरचना हेरिने छ ।
देशभर अहिले देखिएका सं’क्र’मितमध्ये अधिकांशमा लक्षण नदेखिनु र कुनै पनि संक्रमित आइसियूमा बस्नुपर्ने अवस्था नआएकाले यसले नेपालमा रूप परिवर्तन गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । विश्वव्यापी रूपमा देखिएको ‘ट्रेन्ड’अनुसार सय संक्रमितमध्ये ८० जनामा सामान्य लक्षण देखिने, संक्रमितको १५ प्रतिशत आइसियू र पाँच प्रतिशतलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अनुपात नेपालमा भने मिलेको छैन।
अहिलेसम्म कुनै पनि सं’क्र’मितलाई आइसियू र भेन्टिलेटरमा बस्नुपरेन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश सं’क्र’मितमा लक्षणसमेत देखिएको थिएन । त्यस्तै, संसारभरको अध्ययनले ६० वर्षमाथिको उमेर समूहलाई कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम हुने देखाएको छ । तर, नेपालमा यो समूहका संक्रमितमा पनि लक्षण देखिएको छैन।
अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएका परिषद्ले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, प्राज्ञिक संस्था, अस्पताल, वैज्ञानिक, नास्ट, काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत अनुसन्धानमा संलग्न संस्था र व्यक्तिलाई अनुसन्धानमा सामेल गराएको छ । परिषद्ले उनीहरूसँग बृहत् छलफल पनि गरेको छ।
परिषद्का अनुसन्धानकर्ता डा।मेघनाथ धिमालका अनुसार नेपालमा धेरै संक्रमितमा कोरोनाको लक्षण देखिएको छैन । अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा बेग्लै प्रकारको संक्रमण भएको अनुमान गरिएको छ । अन्य देशभन्दा नेपालमा के कारणले फरक पर्न गयो भन्नेबारे अहिले नै केही भन्न सकिँदैन । ‘अध्ययनपछि मात्रै बाल्न सकिन्छ, तयसका लागि छलफल सुरु गरिएको छ,’डा. धिमालले भने ।
चीनदेखि युरोपसम्म पुग्दा कोरोना भाइरस फरक–फरक रूपमा पुगेको डा। धिमालले बताए । उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूका अनुसार नेपालमा संक्रमित व्यक्तिको ट्राभल हिस्ट्री हेर्दा युरोप र भारतबाट आएकाहरू बढी छन् । युरोपबाट आएका संक्रमितमा कडा भाइरस र भारतबाट आएकामा सामान्य देखिएको छ । ‘यस्तो के कारणले भयो वा योभन्दा बाहिर अरू केही कारण छ कि भनेर खोज्ने प्रयास भइरहेको छ,’ डा. धिमालले भने । विज्ञहरूका अनुसार कोरोना भाइरसका सात प्रजाति छन् । तिनैमध्ये कोभिड–१९ रोग पनि एक हो । अन्य देशमा देखिएको भाइरससँग नेपालको तुलना पनि गरिनेछ। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
नेपालमा देखिएको कोरोना भाइरसको प्रजातिबारे पनि विज्ञ र अनुसन्धानकर्तामाझ बहस चलिरहेको छ । त्यस्तै, नेपालीमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अरू देशभन्दा भिन्न छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि फरक–फरक मत छन्। केहीले कोरोना भाइरस नेपालमा कमजोर देखिनुमा हावापानी र खानेकुराको पनि प्रभाव हुन सक्ने अड्कल गरेका छन् । त्यस्तै, भाइरस कमजोर भएर भित्रिएको अनुमान पनि छ । भाइरोलोजिस्टहरूका अनुसार एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा भाइरस प्रवेश गर्दा साबिकभन्दा कडा वा नरम रूप लिन सक्छ।